Gigi Proietti, သူ၏နောက်ဆုံးလက်ဆောင်, သူ့စာအုပ်• musanews
ဒိုမီနီကာ၊ Settembre 26၊ ၂၀၂၁
Jason DeRulo သည် Single ဖြစ်ပြန်သည်
Channing Tatum သည်ကလေးစာအုပ်အသစ်ကိုရေးခဲ့သည်
Linda Evangelista: tweak တစ်ခုကြောင့်အမြဲတမ်းပုံပျက်နေသည်။
ချန်ပီယံလိဂ်၊ အုပ်စုများ၊ အင်တာမီလန်၊ ဂျူဗင်တပ်၊ အာတာလန္တာနှင့် ...
Jacobs - Tamberi အိုလံပစ်ချန်ပီယံ: အီတလီသည်တိုကျို၌ရူးသွပ်သွားသည်
ပင်မစာမျက်နှာ အသိုင်းအဝိုင်းခံစားပါ Gigi Proietti, သူ၏နောက်ဆုံးလက်ဆောင်
Gigi Proietti: "သူလည်း Gassman ထက်ပိုကောင်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူလည်းဆိုနိုင်တယ်"။
ဒီရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်၊ ပြဇာတ်ရုံ၊ ရုပ်မြင်သံကြားဝေဖန်ရေးသမားတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူက Gigi Proietti ကိုသွားတွေ့တိုင်းမကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲပြောခဲ့တဲ့စကားပါ။ သူဟာအသက် ၈၀ ပြည့်တော့မယ့်နေ့ကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့တဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုကျွန်တော်စလိုက်တယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာယေဘုယျအနုပညာစကားလုံးတွေကို Gigi Proietti ကိုပေးချင်တယ်ဆိုရင်သူကအရာရာကိုဘယ်လိုလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲလို့ပဲပြောသင့်ပါတယ်။. ကောင်းစွာ။ သူကသင့်အားရယ်စရာကောင်းသောပုံကြမ်းများဖြင့်မျက်ရည်များကိုရယ်မောစေနိုင်သည်။ ထိုနေရာတွင်အသံ၊ မျက်နှာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တုအတုများသည်ထူးခြားသောအနုပညာဖန်တီးမှုရောနှောမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူသည် Belli သို့မဟုတ် Trilussa တို့၏ sonnet ကိုရွတ်ဆိုပြီးနောက်သို့မဟုတ်နွမ်းနယ်သော Neapolitan ဂီတကိုသီဆိုပြီးနောက်သင့်အားစိတ်လှုပ်ရှားစွာမျက်ရည်ကျနိုင်သည်။
ထိုအချိန်ကတည်းက ၂၀၂၀၊ နို ၀ င်ဘာ ၂ ရက်တွင် ၆ လကျော်သွားပြီဖြစ်သော်လည်းဆုံးရှုံးမှုအတွက်နောင်တမရခဲ့ပါ။ သူ့ကိုအလွန်အမင်းလွမ်းဆွတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကယ်ဆယ်လာသည်။Ndo cojo cojo ။ မည်သည့်စည်းမျဉ်းထက်ကျော်လွန် Sonnets နှင့် jeers" ဤသည်မှာ Gigi Proietti ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ရုတ်တရက်နှင့်အချိန်မတန်ဘဲသေဆုံးခြင်းကြောင့်သူမဖြည့်စွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Gigi ပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးနှစ် ဦး အနက်မှ Carlotta Proietti ကသူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာရွှေတွင်းတလုံးကိုသူတို့ပြန်လည်သိမ်းဆည်းပြီးသူတို့ရဲ့မိသားစုကိုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ ရောမအနုပညာရှင်၏ပါရမီမှမွေးဖွားတစ်ခုအဆုံးမဲ့ပစ္စည်း။ ထို့နောက်Aprilပြီ ၂၀ ရက်တွင်ထိုစာအုပ်သည်အလင်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
"အဲဒါကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောနေတာအဖေက '' Ndo cojo cojo၊ အစက်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးသိသာတဲ့ပရမ်းပတာဖြစ်အောင်ဖန်တီးပါ။ ပြောရင်ပြောရရင်မင်းရဲ့ဖမ်းမိတဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းဖမ်းစားပါ။" ထို့ကြောင့်အဆုံးသတ်ပြီးသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောရုပ်ပုံများကိုပေါင်းစပ်။ နောက်ဆုံးရလဒ်မှာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းတွင်ရေးသားထားသော sonnets ရှစ်ဆယ်ခန့်နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးကဗျာ ၁၅ ပုဒ်ခန့်နှင့်ပြီးခဲ့သည့်နွေ ဦး ပိတ်ဆို့မှုတွင်ရေးသားထားသောထင်ဟပ်မှုများပေါင်းစပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ။ ဤအရေးအသားများကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်သူ၏အသံသည်သူ၏နားထဲတွင်မြည်နေပုံရသည်။ သူကကဗျာနှင့် Sonnets များကိုရွတ်ဆိုရင်းရုတ်တရက်အပြုံးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမျက်ရည်များဖြင့်သရုပ်ဖော်သည်။
ဤစာအုပ်တွင် Gigi Proietti အားလုံးရှိသည်။ အဆိုပါယောက်ျား, ခင်ပွန်းနှင့်ဖခင်, သူ့မိသားစုကချစ်ရာသခင်သည်။ အပြည့်စုံ၊ တောက်ပသော၊ လူနှင့်လူကြိုက်များသောအနုပညာရှင်။ အစဉ်အဆက်သုံးလေးဆက်နှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သောအနုပညာရှင်တစ် ဦး ၏နောက်ဆက်တွဲနောက်ဆက်တွဲများနှင့်သူမကျန်ရစ်ခဲ့သောအနုပညာပစ္စည်းများကိုကျွေးမွေးမည့်သူများ၏စုစည်းခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကျနော်တို့မကူညီပေမယ့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Sagitta Alterနှစ်ပေါင်း ၆၀ နီးပါး Proietti ၏အဖော်နှင့်သူမ၏သမီးများဖြစ်သည် Carlottaeဆူဆန်နာ ဤကြီးစွာသောလက်ဆောင်အတွက်သူတို့ထုပ်ပိုး။
သူတို့ရဲ့ Gigi Proietti ကိုသူတို့အမှတ်ရနေတယ်။
"ဒီစာအုပ်ကသူ့ဆီကပေးတဲ့နောက်ထပ်လက်ဆောင်တစ်ခုပါပဲ။ အဲဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးပေးခဲ့တဲ့အလှအပကိုမေ့ပစ်လိုက်ဖို့ကူညီလိမ့်မယ်" (Carlotta နှင့် Susanna Proietti)
'er crafty', ဤကဲ့သို့သောစတင်သောသော့ခတ်နေစဉ်အတွင်းရေးသားထားသော, အတည်မပြုရသေးသော:
သူက“ ပုံမှန်ပြန်သွားရအောင်! ဟုတ်တယ်၊ ပုံမှန်သာအခုထိငါတို့သိထားတဲ့အတိုင်းပဲရှိနေသေးတယ်၊
ယခင်ဆောင်းပါးဒီဆန်းသစ်တဲ့“ ဘောပင်” ကအသားနဲ့ငါးတွေအတွက်အစားအစာလိမ်လည်မှုကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပြနိုင်ပါတယ်
နောက်ဆောင်းပါးKevin Spacey သည်သရုပ်ဆောင်ခြင်းသို့ပြန်သွားမည်
10ပြီလ 2020, XNUMX
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - တဝက် - KNOT လွယ်ကူမြန်ဆန်သောအကြံဥာဏ် ...
ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း790
နိုဝင်ဘာ 22, 2017
ဒီဇင်ဘာလ 17, 2017